Yese Itsva 'Shark Bait' Clip Inoratidza Makumbo Emunhu Ari Kushandurwa kuita Chum
musha	Horror Varaidzo Nhau	Yese Itsva 'Shark Bait' Clip Inoratidza Makumbo Emunhu Ari Kushandurwa kuita Chum
Vanhu ava vari muDambudziko Guru kunze kweGungwa
by Trey Hilburn III Dai 9, 2022
by Trey Hilburn III Dai 9, 2022 8,045 maonero
Chii chaungaita kana iwe ukaguma wavharirwa kunze kwegungwa pane jet ski? Ndainge ndoti padivi pekutya. Kune imwe, unenge uchibika muzuva. Nekuti, maviri, iwe unenge uri mumvura dze shark uye chokwadi unenge warasika uye wakakomberedzwa nevanhu vane ruzha. Ndiwo hwaro hwe Chii chinonzi Shark Bait Nhau.
Muizvi Shark Bait clip hope dzese dzinotyisa dzinoitika kana musikana ari kuyedza kubatsira shamwari yake kubva mumamiriro ezvinhu anodhonzerwa netsaona munjodzi. Hapana chirevo chinodiwa. Sezvauri kuona wachi inonamirwa pane chimwe chinhu chechipfeko chinoita kuti musikana amhanyirwe kunze kwakadzika kwegungwa rinotonhora. Zvinova zvakaoma kusunungura wachi musikana uyu murombo asati aguma ava masekonzi ekudya kweshaki.
Mutsara we Shark Bait inoenda seizvi:
Boka revanopwanya matsutso vari kunakidzwa nerwendo rwehupenyu hwese pamahombekombe ane jecha eMexico. Sezvo zuva rinobuda pashure pousiku hwemafaro, vanoba ma<em>jet skis mashoma uye vanomhanyira kugungwa. Asi hushingi uye zvisarudzo zvakaipa zvinotungamira mutsaona inotyisa. Kudzika mamaira kubva kumahombekombe, kutya kwechokwadi kunotanga apo boka rinoziva kuti ranyura mumvura ine shark. Pasina nzira yekudzokera uye shamwari imwe ichibuda ropa zvakanyanya, boka rinofanirwa kukurumidza kuona nzira yekupona nayo chikara chakahwanda mumvura pazasi.
Shark Bait inosvika munzvimbo dzemitambo dzakasarudzwa pakudiwa uye digital kutanga muna Chivabvu 13.
Kana usati watarisa iyo yakazara turera ye Shark Bait tarisa apa.